IiNyuvesi eziSimahla zeSifundo eMelika kunye nendlela yokufaka isicelo kwi-2022 nganye
Novemba 12, 2021 SAN
Apha ngezantsi luluhlu lweeyunivesithi ezisimahla zesikolo eMelika kunye nendlela onokufaka ngayo isicelo sokwamkelwa nakweyiphi na iidyunivesithi.
Ndihlala ndithetha ukuba ukufunda phesheya ayisiyonto inzima kakhulu ukuyifezekisa kodwa ukuyifezekisa, kufuneka uzimisele kwaye uthethe ikhosi. Igolide ayibekwa kumhlaba ongekho nzulu kufuneka umbe nzulu igolide.
Apha Study Abroad Nations, siyakunceda wenze ukugrumba okunzulu ukuze ube nokufikelela kulwazi olufunayo ngexabiso eliphantsi. Ukuthetha ngoluhlu lweekholeji zasimahla e-USA, ndinikele ixesha lam lokuphanda oku kwaye ndinike okona kulungileyo okufuneka ukwazi ngako.
Izifundo zasimahla iidyunivesithi zaseMelika kunye nendlela yokufaka isicelo ngasinye
Ngaba iAlice Lloyd College isimahla?
UCurtis Institute of Music
Ikholeji yase-Deep Springs (ikholeji kaJr.
Indlela yokufaka isicelo sokwamkelwa kwiikholeji zasimahla eMelika
Ikholeji ye-Deep Springs (ikholeji yaseJr.)
Alice Lloyd College yenye yezona yunivesithi zibalaseleyo zokufunda simahla eUSA njengenye yeekholeji zomsebenzi ezisemthethweni zesizwe ku-9 kwaye ke, wonke umfundi ofanelekileyo kwesi sikolo unikezelwa ngokuzenzekelayo i-Appalachian Leaders College Scholarship egubungela iindleko zabo zokufunda.
Nangona iindleko zezifundo eAlice College zisimahla, abaxhamli kufuneka basebenze iiyure ezili-10 ukuya kwezi-20 ngeveki bezitshintshisa ngesifundo sasimahla.
IKholeji yase-Alice Lloyd ayihlawulelwanga ngokupheleleyo njengoko kulindeleke ukuba abafundi baqhubeke nokukhathalela izindlu zabo, ezothutho, ukutya kunye nezinye iindleko zobuqu kwaye abafundi abangaphandle kweengingqi ezili-108 abakulungeleyo ukufundiswa simahla kwiKholeji yaseAlice kungafuneka bahlawule imali yokufunda.
Unokuzijonga I-108 counties e-US inelungelo lokufunda simahla eAlice College.
Barclay College yenye yeeyunivesithi zasimahla ezaziwayo e-USA namhlanje. Yikholeji yamaKristu enexabiso lobuKristu kwaye ikwintliziyo yaseKansas eMelika.
Isikolo sibonelela ngenkxaso-mali yokufunda ngokupheleleyo kubo bonke abafundi bexesha elizeleyo abahlala kwikhampasi yaseHaviland okanye yaseKansas.
Ikholeji yaseBarclay izinikele ekulungiseleleni abafundi ukuba baphumelele kubomi bobuKristu, inkonzo kunye nobunkokeli. Kukule meko ke ebonelelwa sisikolo izifundiswa ezipheleleyo ezinikwa bonke abafundi abahlala kwindawo yokulala.
Ukuzibophelela kwekholeji kunye nabaxhasi bayo kukuba abafundi akufuneki baphumelele ekholejini kwaye bathwale ityala elikhulu kwikamva labo elinokuthi libathintele ekulandeleni ubizo lukaThixo.
Ke njengomfundi wedorm, kwiKholeji yaseBarclay, kufuneka ungazikhathazi nganto ngaphandle kwabafundi bakho njengoko ukonwabela ukufaneleka kwemfundo yasimahla, esemgangathweni ebonelelwa sisikolo.
Berea College njengenye yeyona yunivesithi yasimahla yokufunda iUSA iphinda kabini njengenye yeeyunivesithi zaseMelika ngaphandle kwemali yokufaka isicelo. Unokufaka isicelo kule yunivesithi ngokupheleleyo kwi-intanethi kwiwebhusayithi yaseyunivesithi ngaphandle kokushiya igumbi lakho.
Bonke abafundi bafumana izifundiswa ezipheleleyo ngokutshintshiselana ngemisebenzi yokusebenza kwikholeji okanye kwinkonzo yoluntu kuwo wonke ummandla weAppalachian, kubandakanya neenkqubo zokugcina ubugcisa beentaba kunye nezithethe ziphila.
IBerea yamkela kuphela abafundi abafuna uncedo lwezezimali ngokwe-FAFSA, kwaye ngomsebenzi omncinci, ufumana imfundo eyi- $ 100,000.
Abafundi baseBerea bahlawula umndilili nje we- $ 1,000 esetyenziselwa izindlu, ukutya, kunye nemirhumo, ngoncedo lwezezimali kwiincwadi ezikhoyo.
IYunivesithi yaseBrown yenye ye8 Izikolo zeIvy League e-US kwaye yeyona yunivesithi ifunwa kakhulu e-USA.
EBrown, abafundi bayamkelwa ngaphandle kwemvelaphi yabo yezemali. Ke nokuba ungahlawula umrhumo wokufunda okanye awukhathali kwaye awuchaphazeli isigqibo sokwamkelwa kwiYunivesithi yaseBrown kuba wakuba wamkelwe, isikolo sidibana ukuya kuthi ga kwiipesenti eziyi-100 zeemfuno zakho zezemali.
Yintoni uBrown anomdla kuyo kukuqinisekisa ukuba abafundi abafanelekileyo kwizifundo bafumana ithuba elifanelekileyo lokuya eyunivesithi ngaphandle kwemvelaphi yabo yezemali. Ngale ndlela, iYunivesithi yaseBrown inokukhathalela ukuya kuthi ga kwi-100% yemirhumo yokufunda xa yamkelwe.
IYunivesithi yaseBrown- Eyona yunivesithi isimahla eU.SA.
At College of Ozarks njengenye yeekholeji zasimahla ezifundwayo e-US, iindleko zakho zonyaka zemfundo zigutyungelwa yimfundo yaseyunivesithi, kunye nezibonelelo zikarhulumente kunye nemisebenzi yomfundi ekhoyo.
Ukufunda, iiyure ezili-15 ngeveki esebenza kwisikhululo somsebenzi esithile, ukugcina ikholeji ihamba (kubandakanya ivenkile yokubhaka iziqhamo); ngexesha lekhefu, iiyure ezingama-40 zomsebenzi ezipheleleyo; kwigumbi kunye nebhodi, imisebenzi yehlobo.
At Cooper Union, bonke abafundi abenza isidanga sokuqala bafumana iipesenti ezingama-50 ezizodwa zokufumana imali yokufunda kwangoko emva kokuvunyelwa kunye nakwabanye abafundi abanethamsanqa, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 + zokufunda.
Kukho amathuba okufumana isifundi esipheleleyo apha kodwa akuqinisekanga njengalezo zezinye izikolo ezidweliswe apha ngasentla.
IYunivesithi yaseCornell iphakathi kwezona yunivesithi zinokhuphiswano zasimahla eMelika kwaye ukongeza koku, imfundo yasimahla apha ayisiyiyo eyomntu wonke.
Ngelixa isikolo sikhuphisana, akubizi kakhulu kwaye ukuba uvela kusapho lusenza ngaphantsi kwe- $ 60,000 ngonyaka, simahla.
IZiko loMculo leCurtis yindawo yokugcina umculo ePhiladelphia, eyasekwa ngo-1921.
Ukwamkelwa kukhuphiswano olukhulu; Iziko lamkela kuphela inani labafundi elifunekayo ukuze lihlale kwiokhestra kwaye lihlale kwinkampani ye-opera, kunye nabaqambi kunye nabadlali bepiyano bodwa, yiyo loo nto ke ijikeleze abafundi abali-150 ngonyaka.
Into emangazayo yile, wonke waba bafundi ufumana isibonelelo esipheleleyo sokugubungela ukuya kuthi ga kwi-100 yeendleko zabo zezifundo.
KwiKholeji yase-Deep Springs, ukufundiswa simahla kubo bonke abafundi, kulindeleke ukuba abafundi basebenze okanye benze inkonzo kwifama yasekholejini, kwifama, okanye ekuhlaleni.
Isikolo sabela abafundi imisebenzi kwaye abafundi abahlawulwa ngokwenza le misebenzi. Umsebenzi wona, ugubungela inxenye yeendleko zabo zezifundo ezinyanyekelwa ngokupheleleyo sisikolo.
Njengomfundi waseMelika, unelungelo lokufaka isicelo sayo nayiphi na iikholeji zasimahla eMelika ukuba udibana nenkcazo yesicelo. Uninzi lwezikolo ezidwelisiweyo apha zamkela abafundi bamanye amazwe kwaye bayayonwabela imfundo yasimahla njengabanye abafundi.
Emva kokwamkelwa okanye ngexesha lokwenziwa kolwamkelo, ukuba ubonakalisa umdla kulo naluphi na ukhetho kwizifundo zasimahla, isicelo sakho siya kujongwa ukuze kuqinisekiswe ukuba uyakulungela na oko emva koko kunokunikwa okanye kungangqinwa.
Ngapha koko, oku kwenzelwa izikolo apho ukubonelelwa kwabafundi esikolweni simahla kunye nokukhetha kwabafundi ukuba bahlawule iifizi zabo. Ezinye zezikolo zidweliswe apha azinazo ezi ndlela, bazibeka ngokuzenzekelayo bonke abafundi abamkelweyo kwiinkqubo zesikolo zomsebenzi kunye nezifundo ezigubungela izifundo ezizeleyo.
Abafundi bamanye amazwe abavela kwamanye amazwe kufuneka bajonge ukuqinisekisa ukuba ikholeji abafuna ukuyifaka ekwamkeleni abafundi abangengabo baseMelika ukuba bathathe inxaxheba kulo naliphi na izibonelelo ezinikezela ngezifundo zasimahla kubafundi.
Izifundo zasimahla zeYunivesithi yasePrinceton kwi-Intanethi
iikholeji zasimahlaisikolo samahhalaIsifundo sasimahla e-usaizikolo zokufunda simahlaiiyunivesithi zemfundo yasimahlaiikholeji zeziluleko zasimahlaiiyunivesithi zasimahlaukufundwa kwamanye amazwe ngaphandle kwesikolofunda kwaye usebenzeukufunda ngokukhululekileyofunda e-usa mahalaIzifundo zasimahla iikholeji eMelika
Post Previous:Indlela eya kwiMfundo ePhakamileyo xa Ukhubazekile
Okulandelayo Post:Ulufumana njani ukhuthazo kwiZifundo zakho kunye noMsebenzi
Pingback: I-11 yeMisebenzi yoBurhulumente obugqwesileyo ngaphandle kwesidanga
Epreli 6, 2019 kwi-10: 23 pm
Nceda undazise enkosi
Epreli 17, 2019 kwi-6: 32 pm
Unga bhalisa apha ukuba ufuna ukufumana uhlaziyo lwethu lwexesha elizayo simahla.
Disemba 11, 2017 kwi-1: 27 pm
Ngokwenyani olu luluhlu lwezinye iiyunivesithi zasimahla eMelika ngokophando lwam. Kukho iiyunivesithi zasimahla ezingafakwanga kangako kwaye njengoko ixesha liqhubeka, siya kuhlala songeza kolu luhlu. Ndifumanise ukuba iYunivesithi yaseHarvard ikwabonelela ngamathuba asimahla abafundi bamazwe aphesheya kwaye ndiza kuthumela isikhokelo kungekudala. Qhubeka uza ngeenxa zonke okanye ungcono nangoku, rhuma kwi-imeyile yethu Uluhlu lokuhlaziywa kwasimahla kwimicimbi engaphaya kwamazwe.